Snapdragon 712: Nhazi usoro ohuru nke Qualcomm | Gam akporosis
Snapdragon 712: Nhazi Qualcomm ohuru
N'afọ gara aga, Qualcomm juru ya na ndị nhazi ọhụrụ ya, iwebata Snapdragon 710. Ihe nhazi ohuru, ezubere maka oke etiti, ngalaba na-eto eto n'ahịa. Ugbu a, ụlọ ọrụ America nwere ihe nhazi ọhụụ anyị na-ahụ n'ime usoro a dị njikere. Ọ bụ ihe gbasara Snapdragon 712.
Snapdragon 712 a bụ nyocha nke ụdị afọ gara aga. Na otu emeela ọtụtụ ndozi na otu. Ya mere, ekele ha, ọ bụ ihe nhazi nke ezubere igwu egwuregwu na ekwentị. Ha na-elekwasị anya na mmụba arụmọrụ zuru oke, mmelite ndị a.
Ihe nhazi ohuru a sitere na ulo oru a adighi egosiputa nnukwu ntoputa na ogo ma e jiri ya tụnyere afo gara aga. Emeela ka mma na ya, ọkachasị ezubere maka ọrụ mgbasa ozi na egwuregwu. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ihe nwere ike mepee ihe nhazi a na ngalaba ọhụrụ nke ụdị, ugbu a na ịgba egwu na-enweta mkpa na gam akporo.
1 Ọhụrụ Snapdragon 712
2 Igwefoto na njikọta
Ọhụrụ Snapdragon 712
Dịka anyị kwurula, mgbanwe ndị batara na Snapdragon 712 adịghị oke. Otu n’ime mgbanwe izizi anyị hụrụ n’ime ya bụ mmụba n ’oge elekere ya. Ebe ọ bụ na ọ buru ibu karịa ụdị nke gara aga. Ihe owuwu ahụ bụ otu na nke a, na asatọ Kyro 260 cores. Ọ bụ ezie na na nke a ọ na-eme na a ọsọ nke 2,3 GHz, ịnọgide na-enwe otu GPU si afọ gara aga, Adreno 616.
Banyere nkwado nke ebe nchekwa RAM, anyị enweghị mgbanwe ọ bụla. Ọ dị na 16 GB nke Snapdragon 710. Ebe anyị nwere ike ịtụ anya mgbanwe dị na ike, dịka ha kwuru site na Qualcomm na ngosi ya. Maka na anyị na - eche ihe nhazi dị ike karịa onye bu ya ụzọ. Dabere na ụlọ ọrụ ahụ, Snapdragon 712 dị 10% ike karịa onye bu ya ụzọ.
Nke a bụ ihe na Ndị ọrụ kwesịrị ịma karịsịa mgbe ha na-egwu egwuregwu. Ọ bụ ya mere a na-ewere ya dịka onye nhazi kachasị mma ma a bịa n'ịgba egwu. Tụkwasị na nke a, ekwenyela na Snapdragon 712 a na-abịa na usoro emelitere ngwa ngwa. Maka nke a, ha nwere Ndenye Ndenye 4 +, nke bụ usoro kachasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, otu n'ime ọtụtụ na Android taa.
Igwefoto na njikọta
Maka ndị ọzọ, Qualcomm processor ọhụrụ a anaghị ahapụ anyị ọtụtụ mgbanwe ndị ọzọ ma e jiri ya tụnyere ụdị nke gara aga. Kemgbe ọ bịara na njikọta, Snapdragon 712 na-ahapụ anyị agbanweghị. Nwere modem X15 nke ahụ nwere ikike iru ọsọ ọsọ ruo 800 Mbps na nbudata na 150 Mbps na bulite. A na-emejuputa teknụzụ 4 O 4 MIMO maka LTE na teknụzụ 2 × 2 maka WiFi.
Anyị ahụghịkwa mgbanwe na igwefoto, na nkwado ha, na Snapdragon 712. Dị ka ọ dị na ụdị afọ gara aga, ọ bịarutere na nkwado maka ese foto ruo 32 MP ma ọ bụ ruo 20 MP ma ọ bụrụ na ọ bụ okpukpu abụọ igwefoto na ngwaọrụ. N'echiche a, a na-etinye ya na igwefoto n'ihu na azụ nke ngwaọrụ ahụ. Na mgbakwunye, enwere ike ịdekọ vidiyo na mkpebi 4K.
N'afọ gara aga, anyị ezutela ụfọdụ ụdị nke bịara na Snapdragon 710 dị ka processor, dị ka Xiaomi My 8 Lite ma ọ bụ Nokia 8.1, n'etiti ndị ọzọ. Mana nke a abụghị ihe nhazi nke anyị na-ahụkarị na ahịa. Ya mere, a na-atụ anya na site na usoro nhazi ọhụrụ a ọnọdụ ga-agbanwe ma a ga-ahụ ya na ụdị ndị ọzọ. Karịsịa na ọganihu nke adịchaghị n'etiti-nso na gam akporo.
Maka ugbu a Onweghị ihe ọ bụla mara banyere ntọhapụ nke Snapdragon 712. Enweghi data nyere mgbe mmepụta nke otu ga-amalite. Ma ọ bụ na anyị amaghị ihe ọ bụla, ọbụlagodi ugbu a, banyere ekwentị ndị ga-abụ ndị mbụ ga-eji nke a ika processor. Anyị na-atụ anya ịnweta ozi ọhụrụ na nke a n'oge na-adịghị anya. Ruo ugbu a, anyị ga-edozi maka ịmara nkọwa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Snapdragon 712: Nhazi Qualcomm ohuru
Xiaomi Mi 8 Lite ga-anata ọnọdụ abalị abalị nke Mi MIX 3
ZTE mepee ndebanye aha maka Axon 9 Pro ndị ọrụ chọrọ inweta gam akporo Pie beta